ओलीजस्ताे अबुझ र पटमूर्ख शासक विश्वमै जन्मेको छैन : प्रा. कृष्ण खनाल
काठमाडौं। मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जीवनभरि कहिल्यै पनि नेतृत्वका लागि योग्य मानिनँ। मलाई भ्रम भइरहेको छ कि, मैले बढी पूर्वाग्रह राखेँ कि, भनेर म कहिलेकाहीँ सोच्दै थिएँ। तर अहिले आएर संसारले चिन्ने गरेर त्यो मेरो भ्रम निवारण भयो। मेरो मात्र होइन, हामी सबैको भ्रम निवारण भयो।
बेइमान, अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुनेरहेछ। उहाँ (ओली) बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो। बुझेको पनि छैन । कुन प्रणाली ? आफैंले लेखेको संविधान थाहा छैन। भर्खरै वर्षमानजी (पुन) ले फुकुयामाको किताबको उदाहरण दिनुभयो, त्यो किताब लेख्दाखेरि फुकुयामाले भूमिकामा भनेका छन्, ट्रम्पले नजितेको भए यो किताब लेखिँदैनथ्यो। यदि ट्रम्प भन्ने मान्छे जर्ज वासिङ्टनको बेलामा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको भए के हुन्थ्यो होला ? आज हामीले कुरा गर्ने अमेरिकाको प्रणाली नै हुँदैनथ्यो। इन्दिरा गान्धी, जवाहरलाल नेहरुको ठाउँमा सुरुमै प्रधानमन्त्री भएको भए के हुन्थ्यो होला ? त्यहाँ संसदीय प्रणालीको जगै बस्दैनथ्यो।
संविधान बनाउँदैमा प्रणाली बन्दो रहेनछ, प्रणालीलाई अभ्यास गर्नुपर्दछ । नेतृत्वमा बस्ने मान्छे इमान्दार हुनुपर्दछ। इमान्दार मात्र भएर पुग्दैन, बुझेको पनि हुनुपर्दछ। बेइमान, अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुनेरहेछ। उहाँ (ओली) बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो। बुझेको पनि छैन। कुन प्रणाली ? आफैंले लेखेको संविधान थाहा छैन।
डा.बाबुराम भट्टराई यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक संवाद समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यो वेला उहाँले संवाद समितिभित्र अर्को विशेष समिति बनाउनु भएको थियो। पाँच जना शीर्ष नेताहरु सदस्य रहेको विशेष समितिमा तत्कालीन एमालेबाट उहाँ (केपी शर्मा ओली) नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा जनमतबाट आएका सबै कुरालाई समेटेर कहाँ–कहाँ के–के राख्ने भनेर प्रस्तावनादेखि सबै धारामा छलफल भएको थियो। यो हुँदाहुँदै संविधानलाई उहाँ आफैंले तोड्नु भयो। त्यसैले मैले संसद विघटनलाई संविधानको भित्ता फोडेर गरिएको कदम भनेको छु। भित्तै फोडेको छ, काहीँ बाटै छैन। अब त्यो भित्ता फोडेको प्वाललाई मूल बाटो बनाइदिने कि टाल्ने अदालतको काम हो।
धेरै चर्चा भयो, धेरै कुरा भयो। तर अदालतलाई धेरै ट्रेडिसनल सोचाइका रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। मलाई लाग्छ, २०र२५ वर्षै भयो होला, एउटा संविधानको धारामा अदालतको मानहानीका कुरा भयो। केको मानहानी ? अहिलेको जमाना यो हुँदैन भनेर त्यहाँका न्यायाधीशहरु, खासगरी ल (कानुन) का प्रोफेसरहरु अगाडि आए।
यो कुनै व्यक्ति वा सामान्य मुद्दा होइन, सिंगै मुलुकसँग संगत भएको विषय हो। यो राजनीति नै हो, तर यो केपी ओलीको जस्तो जालझेलको राजनीति चाहिँ होइन। केपी ओलीले जालझेल गरे भन्दैमा अदालतले राजनीतिक विषय भनेर यो मुद्दालाई पन्छाउन मिल्छ ? संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ। संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरा गरिएको छ। त्यसकारण यो राजनीतिक पनि हो, संवैधानिक पनि हो।
न्यायाधीशहरु न्याय सेवाबाट हुनुहुन्छ, तपाईंहरुको आफ्नै राय होला। तर धेरै सनातन न्याय प्रणाली काम लाग्दैन। मुलुकले नै भागेको यत्रो ठूलो समस्यामा कति दिन पर्खिने ? कुनै वेलामा राजाले गथ्र्यो, शुक्रबार दरबारको कुन्नि के, शनिबारको विदा दिनुर्पयो, आइतबार के भन्ने र सार्वजनिक मुद्दालाई पर धकेल्ने। यो त २४ घन्टाभित्र पूरा हुनुपर्ने विषय हो। त्यसका लागि एक मिनेट पनि कसैले पर्खिन सक्दैन। मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजान पाइन्छ ? मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने काममा अदालत किन साक्षी बस्ने ? त्यसैले हामी सबैले औंला ठड्याएर भन्नुपर्छ, अदालतले ढिलो गर्न पाइन्न। यो ढिलो गर्न पाइने मुद्दा होइन।
तर अदालतले के भन्छ भन्नेमा धेरै चिन्ता नगरौं। जनता अदालतभन्दा अगाडि छन्। जनता अगाडि उठिसकेपछि अदालत निरीह हुन्छ। मलाई लाग्छ, संविधानसँग केन्द्रित विषयमा नेपालमा यत्रो ठूलो एकता हिजोका दिनमा कहिल्यै भएको छैन। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि सामाजले चिनेका संविधानविद्, कानुन व्यवसायी सबैले भनिरहेका छन्, यो गलत हो। कोही पनि मैले देखेको छैन, जसले सार्वजनिक रुपमा यो ठिक छ भनोस्। योभन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिन्छ ? त्यसैले अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला।
तर, यो मुद्दामा धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन। अर्को, यो विषय अदालतमा मात्रै सकिने विषय होइन। अदालतबाट संसद पुनस्र्थापना होला या नहोला, त्यो छोड्दिऊँ। अदालतले संविधानको बाटोभित्र आफूलाई सीमित राख्ने हो कि असान्दर्भिक हुँदै जाने भन्ने कुराहरु छ। अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु पनि आमजनताको कठघरामा उभिनु भएको छ। साविक पदमा बस्ने मान्छेलाई नागरिकले सोध्न पाउँदैन ? देशको न्यायाधीश भएकाले उहाँहरुका व्यवहार, चरित्रमाथि औंला ठड्याउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै हुँदैन भन्दिन म। खुलेआम भेटे हुन्छ र, त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ। हामीले खोजेको पारदर्शीता हो, गुप्त मन्त्रणा होइन।
बरु भयावह के देख्दैछु भने यसका पछाडिका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम। जसरी अहिले व्याख्या हो कि विकसित भएको हो ? यो छुट्याउन सजिलो छैन। हिजो सरकार एउटा ध्रुवमा बगेकै हो। हिजोका दिनमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालले कम्युनिस्ट इमेज बनाएकै हो। अस्ति भारतले मलाई हटाउन खोज्यो भनेर गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले भारतले साथ दिइराखेको छ भन्ने आउन थालेको छ ।
वास्तवमा पार्टीहरुले विचार गर्नुपर्छ, केपी ओलीलाई अहिले सबैभन्दा बढ्ता वैधानिकताको संकट छ। नेपालको लागि संकट होइन। ओलीलाई वैधानिकताको संकट छ। संसद नभएका कारण मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता गुमाएको अवस्था छ। त्यो बेलामा उनलाई कसले सहयोग गर्छ ? विभाजित नेकपाबाट उनलाई सहयोग हुँदैन, यो त अझै धेरै विभाजित हुँदै जाने होला।
जनता समाजवादी पार्टीले पत्याउँदैन, काँग्रेसले पत्याउँदैन। काँग्रेस र समाजवादी पार्टी सतर्क हुनुपर्ने बेला छ कि तत्कालको फाइदाका लागि चुक्नुहोला कि ? समाजवादी पार्टी अलि अगाडि नै छ, काग्रेस चाहिँ धरधर छ। नेकपा फुट्यो, स्वाभाविक रुपमा विपक्षी दललाई फाइदा होला। तर तत्कालका फाइदाहरुमा पार्टी सीमित भयो भने फेरि अर्को ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो नहोस्, हामीले दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढौं।
हरेक आन्दोलनको एउटा लक्ष्य हुन्छ। आन्दोलन गर्ने हो, संसद पुनस्र्थापना चाहने हो भने ओलीलाई निकालेर फ्याँक्ने भनौं न त। यो विषयमा एउटा संस्थागत प्रक्रिया (अदालतमा) त चलिरहेको छ। तर त्यो संस्थागत प्रक्रियाले बाटो निस्किएन भने हामी आन्दोलनमा नै जानुपर्नेछ, त्यसको अर्को उपाय छैन।
(जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनबारे गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक प्रा। खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
Tagsकृष्ण खनाल प्रा.
प्रधानमन्त्री ओलीलाई योगेश भट्टराईले भने-‘तपाईंको स्तर थाहा पाएँ, खुसी लाग्यो’